Maxaa Lagu Xasuusan Doonaa Siyaasiga Maxamuud Xaashi Cabdi…W/Q:-Subeyr C.Wahaab. |
Maxaa Lagu Xasuusan Doonaa Siyaasiga Maxamuud Xaashi Cabdi…W/Q:-Subeyr C.Wahaab.
Xilka Duqa Magaalo Madaxda,Gobolka Togdheer,ee BURCO.Waxa uu Qabtay Isaga oo ah 27 Sano jir. Sanadku Waxa uu Ahaa Qarnigii Tagay ee 1991.
Waxa jiray Duruufo Adag oo dhanka Nolosha ah,waxa laga soo baxay halgankii adkaa ee dalka dib loogu xoreeyay.may jirin dhamaan waxyaabaha suuro galiya Ama saldhiga u ah nolosha Aadmiga.
Dhamaan kaabayaasha dhaqaaluhu Way burbursanaayeen,Dadkuna waxay markaas uun ka soo guryo noqdeen xeryihii qaxootiga ee dalka aynu jaarka nahay ee Itoobiya.
Dhanka kale,Muujirin Nidaam ama habraac dawladnimo oo sifiican u habaysan,oo saamixi kara in ay Bulshadu u hogaansanto nidaam maamul oo lagu maamulo.
Sidoo kale dhalinyaradii Naftood hurayaasha ahaa ee ka qayb qaatay halgankii Adkaa ee Dalka lagu xoreeyay ayaa waxay wateen,Hubkoodii iyo Tiknikadoodii looma hayn dhaqaale lagu maareeyo oo hubka looga dhigo waxayna ahaayeen awood aan la dhayalsankarin oo ubaahnayd qorshe iyo maskax lagu maareeyo.
Magaalo Madaxda gobalka Togdheer ee Burco Waxay ka mid ahayd magaalooyinkii dawladii kacaanku aad u buburisay dagaalo adagina ay ku dhex mareen xoogagii S.N.M.iyo Dawladdii Siyaad Barre. waxa burbursanaa wadooyinka dhismayaasha guryaha iyo Xarumaha dawladda.
Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi.ayaa Qabtay Xilka duqa magaalada Burco.Xilli ay xaaladu ka darnayd Sidaa aan usoo suureeyay.
Hadaba Su aasha Mudan in la is waydiiyo ayaa waxay tahay,
MAXAA UQBASOOMAY MAXAMUUD XAASHI MUDO XILEEDKII UU AHAA DUQA MAGAALADA BURCO?
Markaynu qiimaynayno Waxaqabdakan waxa mudan in aynu isbarbardhig ku samayno Talaabooyinka uu qaaday iyo xiligaa xaaladdu siday ahayd markaa waxa kuu soo baxaya ama kuu muuqanaya Dadaalka iyo waxqabadka uu muujiyay Maxamuud Xaashi Cabdi. waxaanad ogaanaysaa in uu qabtay arimo la tabaan karo oo mudan xusid iyo boogaadin iyo waliba in looga mahadceliyo Hadaan ku soo dhawaada ama aan dhawr qodon ka xuso wax kamida waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu suuro galiyay Duqii magaalada burco ee xiligaa aynu soo tilmaamnay.
Waxakamida hadaan Qodobeeyo
1.Waxa Uu dib uhabeeyay dhanka dhismaha iyo hawlgalinta dhamaan Xarumihii dawalada ee Burburasanaa
2.Waxa uu suuro galiyay Nidaam Cashuureed dhamaystiran.
3.Waxa uu Sugay Nabadgaliyadii gobolka gaar ahaan Degmada Burco.
4.Waxa uu suuro galiyay in ay Burco noqoto ama ay Marti galiso Shirkii Waynaa ee ay Soomaaliland Kula Soo Noqotay Qaranimadeedii luntay 1960 kii.
Maxaa lagu doortay in Magaalada Burco lagu Qabto Shirkii loogu dhawaaqay gooni isku taaga soomaaliland?
Qiimayn iyo Falanqayn ay sameeyeen gudidii Shirka Burco,Waxay diiradda Saareen Magaalada ku haboon in ay marti galiso ergooyinka ka qayb galay Shirka,Waxayna taladii ku soo Afmeereen in lagu qabto magaalada Burco waxayna ku doorbideen in maamulka degmada burco uu si hufan uga sok bixi karo marti galinta ergooyinka Shirka iyo Sugidda Amaanka Siyaasiyiinta iyo Madax dhaqameedka imanaya magaalada waxana Maayer ka ahaa Maxamuud Xaashi cabdi.
Gunaanad….Qodobadan ayaa waxay muujin iyo Cadayn uyihiin Shakhsiyadda Maxamuud Xaashi iyo in uu yahay Xilkas gudan kara xilka iyo Amaanada loo igmado…LASOCO.W/Q/Subeyr Clwahaan.